आमाबाबु दुबैले छोडेपछि यी बालकले भने- ठुलो भएर ऋण तिर्छौ भाइलाई बचाइदिनुहोस् – Sanjal Nepal
Homeसमाचारआमाबाबु दुबैले छोडेपछि यी बालकले भने- ठुलो भएर ऋण तिर्छौ भाइलाई बचाइदिनुहोस्
November 26, 2020 admin समाचार 1775
काठमाडौ । अस्पतालको बेडमा सानो बाबु सुतिरहेका छन् । उनी ब्लड क्यान्सरले निक्कै थलिएका छन् । सुक्क-सुक्क गर्न बाहेक केही बोल्न सक्दैनन् । उनका दाजुपनि सानै छन् । छेउमा बसेका छन् । बारम्बार सुम्सुम्याउछन् । बाबुलाई जन्मदिने आमाको अनुहारपनि याद छैन । बाबुलाई भने देख्यो भने चिन्न सक्लान् ।
उनीहरुका बाबा आमा यही धर्तीमा छन् । तर सानै उमेरदेखि छोडेर अन्यत्र छन् । उनीहरुलाई अलपत्र छोडेर हिँडेका छन् । बाबु आमाले साथ छोडेपनि दाजु भाई संघर्ष गरेर बाँचिरहेका थिए । यस्तै दुखियाको घरमा बज्रपात परेर आयो । आमा बाबु जिउँदै भएपनि टुहुरा, बेसाहारा बनेका यी नेपाल आमाका सन्तानमा अब ठूलो विपत्ति आइलाग्यो । करिब एक दशक देखि दाजुभाई आमाबुवाको संरक्षण बिनानै हुर्किएका थिए । बाबु १३ बर्षको भएका छन् ।
आमाबुवाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने दाजुभाईले अनुभव गर्ने मौका पाएनन् । त्यही दाजुभाईको यस्तो जोडीलाई फेरी दैव लाग्यो । भाईको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । अस्पतालको शैयामा भाईलाई सुताएर दाई भाईको जिवन रक्षाको भिख मागिरहेका छन् । बाबुआमाको न्यानो काख र माया त उनीहरुले पाएनन् अहिले दाजुभाईकै माया पनि छुट्ने हो की भन्ने त्रासमा बारम्बार भक्कानिन्छन् । कालिकोट शान्ति त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं १ का हिमराज गिरी जसलाई अहिले ब्लड क्यान्सर भएको छ ।
उनको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि नविन गिरी अहिले भिख मागिरहेका छन् । आमाबुवाले सानैमा साथ छोडेर गएका कारण एक्लिएका नविन अहिले भविष्यको सहारा सम्झेका भाईलाई पनि ब्लड क्यान्सर भएपछि उनी भाईको साथ छुट्ने हो की भन्ने डर छ । दाजुभाई सानै छँदा आमाले अर्कैसँग विवाह गरिन् ।
जन्मदिने आमाले अर्काविवाह गरेपछि बुवाले पनि सौतेनी आमा भित्र्याए । पछि बुवा पनि सौतेनी आमाकै घरमा गएर बस्न लागेपछि यि दाजुभाईको अभिभावकको छाँया खोसियो । भाईलाई कालिकोटमै हुँदा ज्वरो आउने र निकै थकाइलाग्ने भएकाले उपचारका लागि सबैको सहयोग जुटाएर काठमाडौं आएर अस्पताल पुर्याए, अस्पतालमा चिकित्सकले भाईलाई ब्लड क्यान्सर भएको सुनाएपछि नविनको पाइताला मुनिको जमिन भासियो ।
१३ वर्षको भाई अस्पतालको शैयामा छन्, उनी सो भाईको जीवन रक्षाको लागि रोएर अपिल गरिरहेका छन् । उनले आँशु झार्दे भने, अहिले मेरो भाईलाई जसरी भएपनि बचाईदिनु भाई निको भएपछि म सबैको ऋण तिर्छु ‘। चिकित्सकले उनको भाईको उपचार सम्भव भएको तर त्यसका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन् । आमाबुवाकै संरक्षण नपाएका यि दाजुभाईले ठूलो रकम कसरी ल्याउने ? त्यसैले सबैसंग सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
उनीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि ९८६१९९६१९८ र ९८४४८९१६५६ मा सम्पर्क गर्नुहोला । सक्नेले आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोला । नसक्नेले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर एक सेयर गरिदिनुहोला । तपाईको सेयर सहयोग गर्नेसम्म पुग्नेछ । यसैले यी बाबुको जीवन बाँच्नेछ ।
November 27, 2020 admin समाचार 6042
काठ्माडौं | बाल्यकालमा पठाई संगै हाँस्ने,खेल्ने,रमाउने रहर हरेक बालबालिकाको हुन्छ तर सबै बालबालिका त्यती भाग्यमानी कहाँ हुन्छन र। उमेरले जम्म ११ बर्ष पुगेगी अर्चना पराजुलिको बाल्यकाल भने अर्कै छ। कक्षा ४ मा पढ्दै गरेकी अर्चनाको
November 25, 2020 admin समाचार 3555
साँझपख पोखरामा ड’रलाग्दो घ’टना, यसरी अनियन्त्रित भई खस्यो प्याराग्लाइडिङ, पाइलटको मृ’त्यु ! साँझपख पोखरामा ड’रलाग्दो घ’टना, यसरी अनियन्त्रित भई खस्यो प्याराग्लाइडिङ, पाइलटको मृ’त्यु ! साँझपख पोखरामा ड’रलाग्दो घ’टना, यसरी अनियन्त्रित भई खस्यो प्याराग्लाइडिङ, पाइलटको मृ’त्यु
December 23, 2020 admin समाचार 3686
LEX 18 agenda conversation: Job club (544595)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515045)
Hello world! (436007)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398454)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109037)